केन्ट लचिलोपन फोरम के हो?
Kent Resilience Forum (KRF) केन्ट र मेडवेको लचिलोपन सुधार गर्न सँगै काम गर्ने संस्था र एजेन्सीहरूको साझेदारी हो। समुदायहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने आपतकालिन अवस्थाहरूमा समन्वयात्मक प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्नुहोस्।
KRF C ivil Contingencies Act (CCA) 2004 को प्रतिक्रियामा स्थापना गरिएका इङ्गल्याण्ड भरका स्थानीय लचिलोपन फोरमहरू (LRFs) मध्ये ४२ मध्ये एक हो। CCA ले बेलायतमा आपतकालिन अवस्थामा नागरिक सुरक्षाको लागि नयाँ विधायी ढाँचा स्थापना गर्‍यो।
LRFs स्थानीय पुलिस क्षेत्रहरूसँग पङ्क्तिबद्ध छन्, सदस्य एजेन्सीहरूसँग मिलेर काम गर्ने सुनिश्चित गर्नको लागि, यदि र जब आपतकालीन हुन्छ, तिनीहरू यसलाई सँगै प्रतिक्रिया दिन र कुनै पनि प्रभाव कम गर्न तयार छन्।
LRF हरू आफ्नै अधिकारमा कानूनी संस्थाहरू होइनन्, तर सदस्य एजेन्सीहरूको साझेदारी हो, जसमा उत्तरदाता 'कोटिहरू' द्वारा सिभिल कन्टिजेन्सी एक्ट (CCA) 2004 अन्तर्गत परिभाषित गरिएको छ:
श्रेणी 1 प्रतिक्रियाकर्ताहरू संगठनहरू हुन् प्रत्यक्ष रूपमा आपतकालीन प्रतिक्रियामा संलग्न। यसमा केन्ट (केन्ट पुलिस, केन्ट फायर र उद्धार सेवा, साउथ ईस्ट कोस्ट एम्बुलेन्स सेवा, सामुद्रिक र तटरक्षक एजेन्सी), स्थानीय अधिकारीहरू, NHS को प्राथमिक हेरचाह पक्षहरू, र अन्यमा आपतकालीन सेवाहरू समावेश छन्। यी उत्तरदाताहरू धेरै नागरिक सुरक्षा दायित्वहरूको अधीनमा छन्।
श्रेणी2प्रतिक्रियाकर्ताहरू ती हुन् जसले प्रतिक्रियामा खेल्न भूमिका खेल्छन् तर कम प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छन्। यसमा युटिलिटी कम्पनीहरू, पूर्वाधार (जस्तै नेटवर्क रेल), र अन्य जस्ता संस्थाहरू समावेश छन्। ऐनले यी उत्तरदाताहरूलाई त्यस्तो कडा कर्तव्यहरू तोक्दैन तर उनीहरूले आपतकालिन व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त जानकारी साझा गर्न र स्थानीय लचकता फोरमसँग पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न आवश्यक छ।
KRF मा सदस्यहरू पनि समावेश छन् जसलाई ऐन अन्तर्गत वर्गीकृत गरिएको छैन तर आपतकालिनहरूमा प्रतिक्रिया दिन ठूलो भूमिका छ, विशेष गरी सैन्य र स्वैच्छिक क्षेत्र।
KRF सदस्यहरूको पूर्ण सूची उपलब्ध छ 'KRF संविधान'
KRF ले के गर्छ?
KRF ले 'संयुक्त आपतकालीन सेवा अन्तरसञ्चालन कार्यक्रम' (JESIP) को सिद्धान्तहरूलाई समर्थन गर्दछ। यो कार्यक्रम आपतकालीन सेवाहरू (साथै अन्य साझेदारहरूले) साझा सिद्धान्तहरू र शब्दावलीहरूसँग काम गर्ने सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको हो।
यसले सुनिश्चित गर्छ कि जब हामी घटनाहरूमा प्रतिक्रिया दिइरहेका छौं हामी सँगै मिलेर काम गर्न सक्छौं।
KRF का उद्देश्यहरू समावेश छन्:
हामी सुनिश्चित गर्न सहयोग योजना लागि, र प्रतिक्रिया दिनुहोस् को, आपतकाल सकेसम्म प्रभावकारी रूपमा।
जानकारी साझा गर्दै आपतकालिनका लागि योजना बनाउन र प्रतिक्रिया दिन एकअर्कालाई सहयोग गर्न।
सँगै काम गर्ने जोखिम मूल्यांकन काउन्टी भर र केन्ट सामुदायिक जोखिम दर्ता विकास गर्दै
हामी सबै कुनै पनि अवरोध (व्यवसाय निरन्तरता व्यवस्थापन) मा सञ्चालन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने योजना।
प्रदान गर्दै जानकारी र मार्गदर्शन जनतालाई (चेतावनी र सूचना) आपतकाल अघि, समयमा, र पछि, ताकि तिनीहरूले आफूलाई र हामीलाई आपतकालिन सामना गर्न मद्दत गर्न उत्तम स्थानमा छन्।